စနေ၊တနင်္ဂနွေတွင် စာကျက်နည်း ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ
Maite Ncuesa | 08/01/2022 22:42 | လေ့ကျင့်ရေး
စနေ၊တနင်္ဂနွေမှာ ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ။ လေ့လာမှုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကို သီးခြားအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ဘောင်ခတ်ထားသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျောင်းသားသည် ဤတာဝန်ကို သီတင်းပတ်ကုန်တွင် လုပ်ဆောင်သည်။ အားလပ်ချိန်နှင့် သူငယ်ချင်းများနှင့် အစီအစဉ်များ ဆက်စပ်လေ့ရှိသော ပြက္ခဒိန်ကာလ။
သို့သော် စေ့ဆော်မှုသည် သိခြင်းဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်ကို အားဖြည့်ပေးသည့် အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ စနေ (သို့) တနင်္ဂနွေတိုင်းတွင် ကျောင်းတက်သူတိုင်း အောင်မြင်လိုသော ပန်းတိုင်တစ်ခုရှိသည်။ သင့်အလုပ်အတွက် အဓိပ္ပါယ်ရှိစေမည့် ပန်းတိုင်တစ်ခု. ဤသည်မှာ စီစဉ်ရန် အကြံပြုချက်အချို့ဖြစ်သည်။
2 2. အနားယူရန် အချိန်ဇယားကို ချမှတ်ပါ။
3 3. သင်၏ဦးစားပေးမှုများနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ချက်များချပါ။
4 4. နံနက်အချိန်ဇယားကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။
5 5. သင်၏လေ့လာမှုပရောဂျက်ကို အခြားသူများနှင့် မျှဝေပါ။
6 6. လေ့လာရေးနည်းပညာများကိုအသုံးပြုပါ။
တိတ်ဆိတ်ပြီး စည်းစနစ်ကျတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က အာရုံစူးစိုက်မှုကို အပြုသဘောဆောင်ပါတယ်။ စနေနေ့မနက်မှာ တံခါးဖွင့်ထားတဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်နားက စာကြည့်တိုက်တစ်ခုကို သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပိတ်ရက်တွေမှာ စာကျက်ဖို့ အိမ်မှာ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ကိစ္စနှစ်ခုစလုံးတွင်၊ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့် ထပ်တလဲလဲဖြစ်စေသော အနှောင့်အယှက်များကို ရှောင်ရှားရန် အရေးကြီးသည်။ အလုပ်တစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်မှသာ နည်းပညာကို အသုံးပြုပါ။.
2. အနားယူရန် အချိန်ဇယားကို ချမှတ်ပါ။
အစောပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်သည် စာသင်ချိန်အတွင်း သူငယ်ချင်းများနှင့် အစီအစဉ်များကို ချိတ်ဆက်လေ့ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အနားယူရန်နှင့်အဆက်ဖြတ်ရန်တနင်္ဂနွေတွင်နေရာတစ်ခုကြိုတင်ထားရန်အကြံပြုလိုသည်။ စီစဉ်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ပြည့်မီဖို့ တွန်းအားတစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အားလပ်ချိန်။ ဒီလိုမျိုး, ထိုကာလသည် ကြိုးစားအားထုတ်မှုကို တန်ဖိုးထားသည့် ဆုတစ်ခုအဖြစ် ရှင်သန်နေပါသည်။.
3. သင်၏ဦးစားပေးမှုများနှင့်အညီ ဆုံးဖြတ်ချက်များချပါ။
စနေ၊ အထူးသဖြင့် သင်တက်ရောက်လိုသော အစီအစဉ်များကို စွန့်လွှတ်ရမည်ဟု ခံစားရသောအခါ၊ သို့ရာတွင်၊ သင်၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ သိထားပြီး ယင်းသည် သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များတွင် ထင်ဟပ်နေသောအခါတွင် သင်သည် ပန်းတိုင်သို့သတိရှိစွာတက်လှမ်းပါ။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် အချို့သော လှုပ်ရှားမှုများကို စွန့်ပစ်ရန် လိုအပ်ပေမည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ သင်သတိရှိရှိ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းတွင်၊ လေ့လာရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သင့်ကိုယ်သင် ထပ်မံအတည်ပြုပါ။.
4. နံနက်အချိန်ဇယားကို အခွင့်ကောင်းယူပါ။
ဤနည်းအားဖြင့်၊ သင်သည် စနေနှင့် တနင်္ဂနွေတွင် ရနိုင်သောအချိန်ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ စောစောထခြင်းသည် မိသားစုဘဝနှင့် ပညာရေးဆိုင်ရာတာဝန်များကို ပေါင်းစည်းရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။ သင့်အချိန်ဇယားတွင် လက်ကျန်ငွေကို ရှာပါ။ လေ့လာမှုပြက္ခဒိန်ကို ဖန်တီးခြင်းသည် သင့်အစီအစဉ်ဆွဲရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ဒါပေမယ့် အချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်သာ လမ်းညွှန်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။. သီတင်းပတ်ကုန်တွင် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လက်တွေ့ကျသောပန်းတိုင်များကို သတ်မှတ်ပါ။
5. သင်၏လေ့လာမှုပရောဂျက်ကို အခြားသူများနှင့် မျှဝေပါ။
သင်လေ့လာနေစဉ်အတွင်း သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကို မြှင့်တင်ပါ။ သို့ရာတွင်၊ သင်တစ်ဦးချင်းလုပ်ဆောင်သည့်အလုပ်ဖြစ်လျှင်ပင်၊ ဤအတွေ့အကြုံ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သော အခြားသူများနှင့် သင်မျှဝေနိုင်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ပိုင် အတန်းဖော်များသည် သင်သရုပ်ဆောင်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆင်တူသည်။ ဒီလိုမျိုး, လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အခြားကျောင်းသားများ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့် မိသားစုများသည် သင့်အား လိုက်ပါသွားမည်ဖြစ်သည်။. သူတို့က မင်းရဲ့အောင်မြင်ပြီးမြောက်တဲ့ ပန်းတိုင်အတွက် ဝမ်းမြောက်ပြီး အခက်အခဲတစ်ခုကြုံရင် မင်းကို အားပေးစကားတွေ ပေးတယ်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေတွင် စာသင်ချိန်အတွင်း အလေ့အကျင့်နှင့် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို ကျင့်သုံးပါ။ ပြီး​တော့ သင်​​ဖြေရှင်း​ပေးရမယ့်​ သံသယ​တွေကို မှတ်​စုစာအုပ်​မှာ ချ​ရေးပါ။ အရေးအသားအားဖြင့် သင်သည် အရေးကြီးသော အချက်အလက်များကို မှတ်မိသည်။ နှင့်သင်ဆက်ဆံနိုင်သည်။ ထိုထူးခြားသောပြဿနာများကို ရှင်းလင်းပါ။. မဟုတ်ပါက၊ မတူညီသောအကြောင်းအရာများအကြောင်း မသိနားမလည်မှု သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးမှုများ စုပြုံလာနိုင်သည်။
နှင့်အသုံးပြုပါ။ လေ့လာမှုကျွမ်းကျင်မှု အယူအဆများကို နားလည်ပြီး ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ကူညီပေးပါသည်။ အဓိက သဘောတရားများကို မျဉ်းသားပါ။ အထင်ရှားဆုံးဒေတာများမှ ပုံများကို ပြုလုပ်ပါ။ မသပ်ရပ်သောတင်ဆက်မှုပါရှိသော အဆိုပါမှတ်စုများကို ရှင်းလင်းပါ။
စနေ၊တနင်္ဂနွေမှာ ဘယ်လိုလေ့လာရမလဲ။ စေ့ဆော်မှု၊ ကတိကဝတ်များနှင့် ဇွဲလုံ့လတို့ဖြင့်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ သင်အောင်မြင်ချင်တဲ့ နောက်ထပ်ပန်းတိုင်ကို မြင်ယောင်ကြည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လေ့လာမှုများ » NOTICIAS » လေ့ကျင့်ရေး » စနေ၊တနင်္ဂနွေမှာ ဘယ်လိုလေ့လာမလဲ။